सर्वश्रेष्ठ एक रोचक छोराछोरीको प्रतियोगिता, एक श्रेणी स्थापना जो संगठित कसरी जानकारीको लागि छोराछोरी, को लागि जो मूल पुरस्कार र उपहार तयार, यो लेख narrates। आखिर, समय उहाँलाई विजय को आनन्द दिन बच्चालाई प्रोत्साहन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
बच्चाहरु को लागि श्रेणी के हो
आज, छोराछोरीको गतिविधिहरु आवश्यक प्रतियोगिताहरूमा विभिन्न समयमा। छोराछोरी साँच्चै प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुहुन्छ - यो स्पष्ट प्रोत्साहन छ। किन यो वस्तुतः कुनै एक सम्झना र व्यक्तित्व बढन व्यक्तित्व को सबै भन्दा विविध manifestations मनाउन छैन त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छ। घटना को आयोजकहरु, "मुकुट" अद्भुत मानसिक लक्षण को manifestations प्रतिभा को सानो मार पनि पहिचान गर्न मा छोराछोरीको लागि नामांकन संग आउँदैछन्। र, माथि को आधार मा, पाठ्यक्रम, तपाईं पनि सबैभन्दा काँतर बच्चा एक उपाधि, एक पदक हास्य, हास्यास्पद मुकुट इनाम गर्न आवश्यक छ। बच्चाहरु को लागि श्रेणी को नाम घटनाको निर्देशन अनुरूप गर्नुपर्छ।
बाली चाडहरूमा र बल गिर
घटना भर आयोजित छन् शरद ऋतु मा, "दुःखी pores", जो, आँखाको आकर्षण रूपमा, बाली काट्ने र प्रशिक्षण pores को शुरुवात संग coincides को शुरू भएको celebrates। ठूलो जोड उपज छ पूर्व-विद्यालय टोली मा, costumed मेला आयोजित। तसर्थ, इनामदायी लागि नामांकन बच्चाहरु क्रमशः Signor टमाटर, गाजर लेडी, Cipollino, मीठा Chereshenka र अरूलाई चयन गरिएका छन्। सामान्यतया तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो लुगा वा सबैभन्दा रोचक प्रस्तुति मनाउन गर्न साथ आउँछन्। तर यो यस्तो "सबै भन्दा राम्रो मेला पोशाक", "देश पहेली को रानी", "सर्वश्रेष्ठ पाठक", "सबै भन्दा राम्रो कवि", "विशेषज्ञ कहानिहरु" र यति मा जस्तै, एक अधिक गम्भीर श्रेणी तयार गर्न सम्भव छ। लागि पुरानो पहिले नै सान्दर्भिक रानी र शरद बल राजा चुन्नु गर्न। तर अझै पनि यो पर्व एक मजाक र छोराछोरीको लागि नामांकन हुनुपर्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। यी एक "मिस Ocharovashka", "मिस हंसते," "श्री चटपटाउनु", "श्री र मिस Artistry," "श्री ऊर्जा", "मिस र श्री रचनात्मकता" र जस्तै हुन सक्छ। यी नामांकन को थप, यो भोज आयोजना गरिनेछ थप रोचक, अधिक बच्चाहरु पहिचान गरिनेछ। त्यसैले तिनीहरू सबै रमाइलो र अधिक प्राप्त गर्नुहोस्।
बच्चाहरु को लागि बौद्धिक र रचनात्मक गतिविधिहरू
यहाँ हामी धेरै राम्रो हुन चयन मापदण्ड सबै नामांकन र विजेता विचार छ। उदाहरणका लागि, जवान कवि को प्रतियोगिता सञ्चालन, यो सम्भव निम्न नामांकन प्रस्तावित छ:
प्राण ठूलो gusts।
अखबार प्रतियोगिता मार्फत, यो यस्तो निर्देशन आवंटित गर्न उपयुक्त छ:
हास्य र हास्य सबै सँगै पुल!
वैज्ञानिकहरू र ज्ञान - एक शक्तिशाली शक्ति।
देशको मूल भाषा को इतिहास।
बिदा, जो मा एकात्मकता मेला, नामांकन "सबै भन्दा सक्रिय टोली", "सबै भन्दा रचनात्मक टीम", समावेश गर्न पक्का हुन "सबै भन्दा रमाइलो कर्मचारी।" आखिर, सन्तानको बिक्री मात्र आफ्नो शिल्प बेचन छैन, जबकि तर पनि, वेशभूषा र हास्यास्पद कविता प्रयोग गरेर Shill रूपमा आफूलाई प्रकट, खरीददारों आकर्षित गीतहरू। यो पनि एक वर्ग वा समूह सामान्य खजाना मा थप पैसा गर्नेछन् भन्ने अवलोकन थियो। यो सबैभन्दा रोचक र मूल शिल्प, सबैभन्दा सिपालु सिर्जना टिप्पण लायक छ।
छोराछोरीको सूप। छोराछोरीको मेनु: सानो लागि सूप
रूपमा बच्चाहरु द्वारा सहन प्रतिक्रिया,: खोप (mumps)
बाल सदन लागि खेल उपकरण - आफ्नो बच्चाहरु को स्वास्थ्य को ग्यारेन्टी
निदान प्रिस्कूल: प्रविधी परीक्षण (उदाहरण)
अखरोट: उपयोगी गुणहरू, संरचना र आवेदन
सबै अवसरका लागि आधुनिक Hairstyles
पापी रेशा: कारणहरू, किस्महरू
चिनियाँ मार्शल आर्ट मास्टर IP मानिस: एक जीवनी, रोचक तथ्य र उपलब्धिहरू
अधिग्रहण - यो के हो? पवित्र आत्मा को अधिग्रहण
क्यानाडा पानी र जमीनमा बस्ने जनावर: आकार, भोजन, प्राकृतिक निवास र विवरण। क्यानाडा रूस मा पानी र जमीनमा बस्ने जनावर